Home /Blog/Donald Trump oo ka hadlay askari Mareykan oo Soomaaliya lagu dilay
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay askari u dhashay Mareykanka oo lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Shabeelada hoose xilli ay kaabayeen ciiamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM oo weerar ku qaaday saldhig ururka Al-shabaab ku leeyihiin Shabeelada hoose.
Donald Trump ayaa sheegay askariga inuu ku geeriyooday waajib qaran , waxaana uu ku hanjabay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab iyo duqaymaha ay u gaysanayaan saldhigyadooda.
Madaxwaynaha Mareykanka ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay askariga Mareykanka ah.
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa xaqiijiyay hal askari inuu kaga geeriyooday gobolka Shabeelada hoose shalay xilli ay la talin siinayeen ciidamada AMISOM iyo dowladda faderaalka , laba kalena ay ku dhaawacmeen howlgalkaasi.
Waa askarigii ugu horeeyey ee Mareykanka looga dilo Soomaaliya tan iyo 1994tii xiligaasi oo looga dilay Soomaaliya 18- askari oo ay dagaal isaga horyimaadeen jamhaddii USC ee uu hogaaminayay Gen Caydiid.
Mareykanka ayaa bishii horay Soomaaliya usoo diray tababarayaal iyo la taliyeyaal ciidamada AMSIOM iyo dowladda ka taageera la dagaalanka Al-shaabab.
Madaxwaynaha Puntland oo ku wajahan shirka London